Yintoni iBounce Rate? Ungawuphucula njani uMyinge weRhafu yakho? | Martech Zone
Yintoni iBounce Rate? Ungawuphucula njani uMyinge weRhafu yakho?
NgoLwesithathu, uDisemba 9, 2020 NgoLwesithathu, uDisemba 9, 2020 Douglas Karr
Ireyithi yokubuyisa yenye yezo ze-KPI abathengisi bedijithali bachitha ixesha elininzi behlalutya kwaye bezama ukuphucula. Nangona kunjalo, ukuba awuyiqondi ngokupheleleyo into eyiyo, unokube wenza impazamo kwindlela ozama ukuyiphucula ngayo. Ndiza kuhamba ngenkcazo yenqanaba lokubhabha, ezinye iindlela, kunye nezinye iindlela onokuthi uphucule ngazo izinga lokuncipha.
I-Bounce Rate Inkcazo
A bounce yiseshoni yephepha elinye kwindawo yakho. Kwi-Analytics, i-bounce ibalwa ngokukodwa njengeseshoni ebangela kuphela isicelo esinye kwiserver ye-Analytics, njengaxa umsebenzisi evula iphepha elinye kwindawo yakho aze aphume ngaphandle kokwenza ezinye izicelo kwiserver ye-Analytics ngexesha leseshoni.
Ukulinganisa ngokuchanekileyo inqanaba lokuhlawula, kufuneka sithathe inani elipheleleyo leebhampa kwaye sithabathe utyelelo ekubhekiswa kulo kwibhlog ukuya kwiwebhusayithi yequmrhu. Ke-masihambe ngeziganeko ezithile:
Undwendwe luhlala kwiposti yebhlog, alunamdla kumxholo, kwaye lishiya indawo yakho. Yibhoso leyo.
Umhlaba otyelele kwiphepha lokufika emva koko ucofe umnxeba kwisenzo sokubhalisela isicelo sakho. Oko kubasa kwindawo engaphandle kwindawo eyahlukeneyo okanye isizinda esisebenzisa iiakhawunti ezahlukeneyo zikaGoogle. Yibhoso leyo.
Umhlaba otyeleleyo kwinqaku elivela kwisiphumo sokukhangela apho iphepha lakho libekwe phezulu… kwikota engasebenzi kwiimveliso okanye kwiinkonzo zakho. Bacofe iqhosha ngasemva kwisikhangeli sabo ukubuyela kwiziphumo zokukhangela. Yibhoso leyo.
Iziganeko zingenza amaRhafu okuSusa iZero
Ireyithi yokubheja ijongwa ngokubanzi njengomlinganiso obonisa undwendwe lokuqala Nxaxheba kwiwebhusayithi… kodwa kufuneka ulumke. Nantsi imeko enokukumangalisa:
Uqwalasela uhlalutyo isiganeko kwiphepha… njengeqhosha lokudlala ngokucinezelwa, skrola umsitho, okanye into ebonakalayo yokuvela.
Umsitho, ngaphandle kokuba kuchaziwe njenge ukungasebenzi, Ngokobuchwephesha Nxaxheba. Abathengisi bahlala bongeza imicimbi kumaphepha ukuze babeke esweni ngakumbi indlela iindwendwe ezinxibelelana ngayo nezinto ezikwiphepha okanye xa izinto zivela ephepheni. Iziganeko zibandakanya, ngoko nangoko babona amaxabiso okuhla ehla aye kwi-zero.
Ireyithi yokuBuyisa xa kuthelekiswa noMgangatho wokuPhuma
Sukuyidida into yokuPhuma ngeRhafu yokuBuya. Umgangatho wokuphuma ucacile kwiphepha elinye kwindawo yakho kwaye nokuba undwendwe lushiye elo phepha laya kwelinye iphepha (kwisiza okanye ngaphandle). I-Bounce Rate icacile kwiphepha lokuqala apho undwendwe luhlala khona kwiseshoni abayilungiselele kwindawo yakho… nokuba bayishiyile indawo yakho emva kokundwendwela.
Nazi izinto ezithile phakathi Ireyithi yokuphuma kwaye Umvuzo weBounce kwiphepha elithile:
Kuzo zonke ukujonga iphepha, Ireyithi yokuphuma yipesenti ebinguye gqibela kwiseshoni.
Kuzo zonke iiseshoni eziqala ngephepha, Umvuzo weBounce yipesenti ebinguye kuphela enye yeseshoni.
Umvuzo weBounce iphepha lisekwe kuphela kwiiseshoni eziqala ngelo phepha.
Ukuphuculwa kweNqanaba lokuHamba kungonzakalisa ukuzibandakanya
Umthengisi unokuliphucula iqondo labo lokubhabha kwaye atshabalalise ukuzibandakanya kwindawo yabo. Khawufane ucinge umntu ongena kwiphepha kwindawo yakho, efunda wonke umxholo wakho, kunye nokucwangcisa idemo kunye neqela lakho lokuthengisa. Abazange bacofe enye into ephepheni… bafika nje, bafunda amanqaku okanye izibonelelo, emva koko bathumela umthengisi nge-imeyile.
Ngokobuchwephesha o bounce… Kodwa ibiyingxaki ngenene? Hayi, akunjalo. Kukuzibandakanya okumnandi! Yinto nje eyenzekileyo ngaphandle kwesakhono sokuhlalutya ukubamba umsitho.
Abanye abapapashi bayazithoba ngamaxabiso okuhlawula ukuze babonakale ngcono kubathengisi nakubaxhasi. Benza oku ngokwaphula umxholo kumaphepha amaninzi. Ukuba umntu kufuneka acofe amaphepha ama-6 ukuze afunde inqaku elipheleleyo, uphumelele ekwehliseni izinga lokuncipha kwakho kunye nokwandisa umbono wakho wephepha. Kwakhona, eli licebo lokunyusa amaxabiso entengiso ngaphandle kokongeza naliphi na ixabiso okanye iinzame kumtyeleli okanye kwintengiso yakho.
Obu buchule bububhedengu kwaye andiyicebisi… kubathengisi okanye kubakhenkethi bakho. Amava otyeleli wakho akufuneki amiselwe ngumgangatho wokuhlawula wedwa.
Ukuphucula iRhafu yakho yokuBuya
Ukuba ungathanda ukuthoba isantya sokubuyisa kwakho ngokufanelekileyo, kukho iindlela ezimbalwa endinokucebisa ngazo:
Bhala umxholo oququzelelwe kakuhle kwaye ulungiswe ngokufanelekileyo ochaphazelekayo kubaphulaphuli bakho. Sebenzisa amagama aphambili ngokufanelekileyo ngokwenza uphando ngawaphi amagama aphambili abonisa ukugcwala kwindawo yakho, emva koko uwasebenzise kwizihloko zakho zephepha, izihloko zeposi, ii-post-slugs, kunye nomxholo. Oku kuyakuqinisekisa ukuba iinjini zokukhangela zikukhombisa ngokufanelekileyo kwaye awuzukubanakho ukuba neendwendwe emhlabeni kwindawo yakho abangakhathalelwanga kwaye abonayo.
Sebenzisa amakhonkco angaphakathi kumxholo wakho. Ukuba abaphulaphuli bakho bafike kwindawo yakho yokukhangela-kodwa umxholo awuhambelani-nokuba nonxibelelwano kunye nezihloko ezinxulumene noku kunokunceda ukugcina abafundi bakho. Unokufuna ukuba netafile yesalathiso esineebhukumaka ezinceda abantu ukuba baye ezantsi kwimixholwana ethile okanye kwimixholwana (ucofa ibhukumaka kukuzibandakanya).
Yenza ngokuzenzekelayo izithuba ezinxulumene noko ngokusekwe kwithegi okanye amagama aphambili. Kwibhlog yam, ndisebenzisa Izithuba ezihambelana noJetpack inqaku kwaye lenza umsebenzi omkhulu wokubonelela ngoluhlu lwezithuba ezongezelelweyo ezinxulumene neethegi ozisebenzisileyo kwisithuba sakho sangoku.
Usebenzisa uMlawuli weThegi kaGoogle, ngokulula qalisa imicimbi yokuskrola kwiphepha. Masijongane nayo… umsebenzisi oskrola kwiphepha Nxaxheba. Ewe kunjalo, uya kufuna ukubeka esweni ixesha lakho kwisiza kunye neetrikhi zokuguqula ngokubanzi ukuqinisekisa ukuba umsebenzi uyinzuzo kwiinjongo zakho zizonke.
Ukususa iiBounces eziziNqobo zokuzibandakanya
Uyayikhumbula imeko yam engentla apho ndikhankanye khona ukuba umntu othile ungene kwisiza sakho, funda iphepha, emva koko ucofa indawo yangaphandle ukuze ubhalise? Unokwenza izinto ezimbalwa ukuqinisekisa ukuba oku akubhaliswanga njenge-bounce kwindawo yakho:
Nxibelelanisa umsitho ngonqakrazo lwekhonkco. Ngokongeza umsitho, ususile nje ukubuyela xa undwendwe lucofa apho ungathanda ukuba baye khona. Oku kunokwenziwa nge cofa-ukubiza okanye ucofe kwi-imeyile amakhonkco ngokunjalo.
Yongeza iphepha elihamba phambili lokuqondisa kwakhona. Ukuba ndicofa ukubhalisa kwaye ke umhlaba kwelinye iphepha elingaphakathi elilandelela ucofe kwaye uqondise kwakhona umntu kwiphepha elingaphandle, eliya kuthi libale njengolunye uluvo lwephepha hayi ukubetha.
Ukubeka iliso kwiNqanaba lakho lokuHamba
Ndingakucebisa kakhulu ukuba ugxile kwinqanaba lokuhlawula ixesha elininzi kunokukhathazeka malunga nomzekelo woku apha naphaya. Usebenzisa ezi ndlela zingasentla, ungalushicilela utshintsho phakathi kwe-analytics kwaye emva koko ubone ukuba liphucuka kangakanani izinga lokuncipha kwakho okanye liya lisonakala. Ukuba unxibelelana nabachaphazelekayo kwinqanaba lokuhlawula njenge-KPI, ndingacebisa ukwenza izinto ezimbalwa kwinkqubo.
Nxibelelana ukuba yeyiphi inqanaba lokuhlawula kubachaphazelekayo.
Nxibelelana ngesizathu sokuba amaxabiso okubuyisa isenokungabi sisalathiso esihle ngokwembali.
Nxibelelana notshintsho olukhulu kwinqanaba lokuncipha njengoko usongeza imicimbi kwindawo yakho ukubeka esweni ukubandakanyeka.
Gcina imeko yakho yokuhamba kwexesha kwaye uqhubeke nokwenza ubume besiza sakho, umxholo, ukukhangela, ukubiza isenzo kunye nemicimbi.
Eyona nto iphambili kukuba ndingathanda ukuba iindwendwe zingene kwiphepha, zifumane yonke into eziyifunayo, kwaye zibandakanyeke nam okanye zihambe. Undwendwe olungafanelekanga aluyonto imbi. Kwaye undwendwe olubandakanyekayo oluguqukayo ngaphandle kokulishiya iphepha abakulo aluyonto imbi, nokuba yeyiphi. Uhlalutyo lwezinga lokuhlawula lifuna nje umsebenzi omncinci owongezelelweyo!
tags: Uhlalutyobounceizinga lokuhlawulai-google analytics
Nov 29, 2009 ngo-1:30 PM
Andizange ndicinge ukwenza nantoni na efana nezo ndlela zokukopela ukunyusa i-pageviews. Ndinereyithi esezantsi yokutsiba esele ikwindawo yam kuba ingeyongxaki enkulu ndicinga ukuba andikhange ndicinge ngayo!
Ngokubhekiselele kwiindlela ezicetyiswayo, bendisebenzisa iplagin yezithuba ezihambelanayo okwethutyana ngoku kwaye ngokuqinisekileyo iyakwandisa ukubonwa kwamaphepha. Andikawufumani umxholo wam wokudibanisa ulungiselelwe okwangoku.
Isithuba sam samva nje Ibhokisi yentombazana eSlim yeeMfihlo zokuphononongwa